Ye-Mon's Personal Pages: Home Made Jokes for Water Festival
Labels: forget-me-not, jokes
ရီရတာ ပါးစပ် နားရွက် ချိတ် တော့မယ် ...
မပေးဘူးဟေ့ မပေးဘူး ... :P
yes i also miss my old times with friends. Thanks for your post. I miss you all.
သင်္ကြန်မှာ ကျွန်တော်လည်း ပေါက်ကရဆိုခဲ့ဖူးတယ်ဗျ…
မဏ္ဍပ်တခုမှာ ကောင်မလေးတွေ ပက်မယ့်လူမရှိတော့ ပိုက်တွေ ပူးကိုင်ထားတော့ အော်လိုက်တာလေ…
ဟိုကောင်မလေးချောလိုက်တာ… ကိုင်ထားတာလည်း နှစ်လုံးပြူးဗျ….
အဲဒါလည်းကြားရော.. ကိုင်ထားတဲ့ ပိုက်နှစ်လုံးပြစ်ချပြီး အထဲဝင်သွားပါလေရော။
နောက်ပိုင်းတွေမှာ ပိုက်ပူးကိုင်ထားရင် အဲဒါအော်တော့တာပဲ။ လွမ်းတော့လည်းလွမ်းသားပဲ…
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်တော့ တစ်ခါက အော်ဖူးတာ သတိရတယ်။ ရာဇာနေ၀င်းပါတဲ့ သင်္ကြန်ကားက မဏ္ဍပ်ရှေ့မှာရပ်တုန်း ရာဇာ့ဖင် လောက်စာလုံးဝင် ကယ်ကြပါဦးရှင်။ ရာဇာ့ဖင် တုတ်နဲ့ထိုး အားရိုးရိုး အားရိုးရိုး ဆိုပြီး
၀ိုင်းအော်ကြတာ။ နောက်တော့ မဏ္ဍပ်ဖက် လှည့်တောင် မကြည့်တော့ဘူး သိလား။ :P
အဲဒီသံချပ်တွေ တယောက်ယောက်က ပြောပြထားလို့ ကြားဖူးနေဒယ်.. တဖွဲ့တည်းနေမှာ... ဟတ်လား..
အဟား နောက်ဆုံးသံချပ်ကိုဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ ။ ကိုရဲမွန်ကြီးက ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ အဲလိုလည်း ရတာပဲကိုး အဟား ။